”Soow anagaa heshiinneyba!” – Maxaa keenay inuu Imaaraadku markale isku qorqoro dalka IIRAAN?! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Soow anagaa heshiinneyba!” – Maxaa keenay inuu Imaaraadku markale isku qorqoro dalka...
”Soow anagaa heshiinneyba!” – Maxaa keenay inuu Imaaraadku markale isku qorqoro dalka IIRAAN?!
(Abuu Dabeey) 19 Abriil 2020 – Dalka Imaaraadka ayaa agab caafimaad oo muhim ah u diray Iiraan oo la tacaalaysa caabuq sidaha Covid-19 ee faafa, waana arrin dad badan ka yaabisay marka la eego boola xooftadii ay Abuu Dabeey u jeedinaysey deriskeeda woqooyi.
Horraantii 2000, Imaaraadku waxay ku daba dhegeen gaarigii Sucuudiga, iyagoo Iiraan ku tilmaamay halista amaan ee gobolka.
Xilligii Obama waxay Maraykanka ka dalbadeen in loo dhiso ciidan hufan oo iska caabbin kara is ballaarinta Iiraan.
Abu Dhabi waxay xitaa gaartey heer ay qalqaalo u gasho inay Shiinaha ka codsato inay Iiraan xiriirka u jaro, taasoo ay dabcan ku qosleen.
Tan iyo horraantii 2010-kii, waxay Imaaraadku ku karnaayeen Iiraan iyagoo xogo been ah ku quudinayey nidaamka Washington si tillaabo adag looga qaado Iiraan.
Yeelkeede, markii ay xiisaddu sii kacday oo ay Iiraan iskaga baxday heshiiskii nukliyeerka, laguna daro beri dhowayd markii ay qarka isu fuuleen Iiraan iyo Maraykanku kaddib khaarajinkii Sulaymaani, waxay Imaaraadku garowsadeen inay iyagu fadhiyaan afka qaxaabtii dabka, oo haddii uu dagaal bilowdo ay Iraan iyaga jugaynayso – xusuuso weerarkii dekedda Fujayrah – isla markaana aanay Iiraan kula dagaallami karin askar Maraykan ah.
Markii ay Iiraan oo Xuutiyiinta adeegsanaysa ay weerartay ceelasha saliidda Sucuudiga ee Abqaiq iyo Khurais bishii Sebtembar, Washington indhaha unbay ka eegatay.
Waana marka ay Abu Dhabi iyo Riyadh garowsadeen inaysan Iiraan ku maagi karin cududda Maraykanka, oo isagu haddiiba uu dagaal gelayo dantiisa uun ka dhex eeganaya.
Sanadkii tegey, waxay Abu Dhabi si la dareemi karo u bedeshey istaraatijiyaddii Iiraan, iyadoo bedeshey ku tiirsanaanteedii saa’idka ahayd ee Maraykanka oo u muuqda cudud sii dhimanaysa.
Imaaraadka ayaa taa biddaalkeeda hadda u muuqda mid dabbaqaya murtida tiraahda “haddii aanad ka adkaan karin, la saaxiib”.
Previous articleMuslimiinta Hindiya oo loo qabsaday karoonaha dalkaa ku faafaya (Sabab la yaab leh oo ku hoos jirta)
Next articleDEG DEG: Ciidamada Libya oo sheegay inay soo rideen dayuurad dagaal oo Imaaraati ah